Fatuux Tech – The World Class Tech Update
The World Class Tech Update
Illaa halis intee la eg ayuu leeyahay FaceApp!!!
Maalmahaan baraha bulshada waxaa ku soo badanaaya in dadka ey qiyaasaan muuqaalkooda markii ey weynaadaan ama markii ey dhalin yaro noqdaan siduu u ekaan doono ayagoo isticmaalayo aaladda loo yaqaano FaceApp. FaceApp ma aha barnaamaj cusub, waxuu soo baxay 2017, waxaa leh Russia ama ruushka qolo wax u hormariso. Balse waxaa la moodaa baryahaan inuu … Continue reading Illaa halis intee la eg ayuu leeyahay FaceApp!!! →
Fatuux Cade	Hacking News, Mobile Apps, Tech News	Leave a comment July 18, 2019 July 18, 2019 1 Minute
Maxaa ka jira in Whatsappka uu yahay mid AMAAN ah??!!
Haddii aad u maleyso dhamaan social media ha aad isticmaasho iney yihiin kuwo la isku haleen karo oo tuugadda internet ka aysan awood u laheyn iney ku saameeyaan, Haddaba waa inaad mar-labaad aad fakarto, saad mooday ma aha. Qaasatan social media ha loo yaqaano Whatsapp ka uu leeyahay shirkadda facebook ga waa mid aad u … Continue reading Maxaa ka jira in Whatsappka uu yahay mid AMAAN ah??!! →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment July 16, 2019 1 Minute
Sidee ku xallin kartaa dhibaatada uu la imaado PlayStation4 dhanka heer kululka!!
Heer kululka kaliya dhibaato ma aha, ee waxuu wax u geesan karaa fiilooyinka, iyo system ka gudaha uu ku shaqeeyo PlayStation4. Haddaba waxaa jira dhowr siyaabood aad uga bad baadi karto. Marka hore ogow PlayStation ka waxuu la imaadaa heer kulul soo booda ah, oo badanaa tilmaamta inuu system ka cabaar shidnaa. Si aad u … Continue reading Sidee ku xallin kartaa dhibaatada uu la imaado PlayStation4 dhanka heer kululka!! →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment June 8, 2019 June 7, 2019 1 Minute
Muxuu salka ku hayaa Dagaalka u dhaxeeya Huawei iyo Google!!
Bilowga sheekadda haddii aan kasoo bilaabno waxey dhaxmartay Mareekan ka iyo China. Waxey isku heesteen dagaal dhanka dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ah. Mareekanka ayaa ka cabsaday korarka dhaqaale ee China sameeneyso, sidaas daraadeeda waxuu cunaqabateen saaray shirkadda Huawei oo laga leeyahay dalka China. Waxuu u sababeeyay cunaqabateen kiisa in shirkadda Huawei ey kusoo darto taleefanadeeda … Continue reading Muxuu salka ku hayaa Dagaalka u dhaxeeya Huawei iyo Google!! →
Fatuux Cade	Tech News	Leave a comment May 25, 2019 May 24, 2019 1 Minute
Google oo Soomaaliya u soo bandhigtay mashruuc internetka lagu gaarsiin karo miyiga iyo goobaha fog…
(San Francisco, Maajo 20, 2019) Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, Md. Cabdi Sheekh Axmed, ayaa booqday Xarunta Dhexe ee Shirkadda Loon oo ah mashruuc la mataano ah Google oo xaruntiisu tahay gobolka California ee dalka Mareykanka. Maareeyaha oo martiqaad rasmi ah ka helay Loon ayaa la kulmay madaxda ugu sarreysa Loon oo uu hor kacaayay … Continue reading Google oo Soomaaliya u soo bandhigtay mashruuc internetka lagu gaarsiin karo miyiga iyo goobaha fog… →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment May 21, 2019 May 21, 2019 1 Minute
8 Adeeg oo lacag la’aan ah aad uga faaideysan karto Twitter ka.
1. Isticmaal TweetDeck si aad u kala habeeso Posts kaaga/Tweets kaaga. Waxaa Laga yaabaa inaad leedahay followers badan oo markasta kaa sugaya inaad wax soo dhigto, laga yaabee inaadan adiga waqtigaas heynin oo saacad kasta aad wax ku qorto. Waxaa kuugu haboon Inaad isticmaasho adeegaan tweetdeck adigoo uga faaideysanaya inaad hal mar qorto waxaaga oo … Continue reading 8 Adeeg oo lacag la’aan ah aad uga faaideysan karto Twitter ka. →
Fatuux Cade	Tech News	Leave a comment May 18, 2019 2 Minutes
540 million oo isticmaala Facebook ga oo la helay xogtooda oo dayacan, taalana serveradda Amazon
Iyaddoo baryahaan facebook ey u aheyd maalmo xun kadib markii la helay 400 mallion oo isticmaalayaal ah password kooda, haddana xaaladdi wey ka dartay.. Tiro dhaafeysa haaf billion oo isticmaalayaal ah ayaa la helay xogtooda oo ku dayacan servers ka Amazon iyadoo difaac la'aan ah siduu sheegay website ka The Hacker News. Xogtaas oo lasoo … Continue reading 540 million oo isticmaala Facebook ga oo la helay xogtooda oo dayacan, taalana serveradda Amazon →
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	Leave a comment April 4, 2019 1 Minute
Waa maxay farqiga u dhaxeeya Systems ka jira dunidda!!!
Sidaan wada ognahay waxaa Jiro dhowr system uu ku soo kaco computer ka. Maanta waxaan wax yar ka sheegi doonaa wax yar oo ku saabsan 3da ugu waaweyn oo laisticmaalo. Haddii aan ku bilowno system ka caanka ah oo badan keena isticmaalo Windows, Waa system ama Operating System sida loo yaqaan oo leh shirkadda Microsoft. … Continue reading Waa maxay farqiga u dhaxeeya Systems ka jira dunidda!!! →
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	Leave a comment March 20, 2019 March 20, 2019 2 Minutes
Maxey tahay Mushkilladda weyn oo ku timid Facebook iyo saaxiibadiisa:)
Maalinti arbacadda aheyd 13/3 ay ku beegneyd goor-sheegtada 07:00pm geeska Africa, ayuu la kulmay facebook cilladdi ugu weyneyd abid uu la kulmo. Arintaan ayee ku tilmaameyn bartooda Twitter ka iney aheyd cillad farsamo ku imaaday servers kooda taasoo usuurta galin weysay isticmaalayaasha iney galaan application ka facebook ga misane ay wax dhigaan qaas ahaan sawir. … Continue reading Maxey tahay Mushkilladda weyn oo ku timid Facebook iyo saaxiibadiisa:) →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment March 16, 2019 March 15, 2019 1 Minute
Maxey ku kala duwan yihiin Computer Science iyo Information Technology!!
Inkastoo Computer Science (CS) iyo Information Technology (IT) aysan farqi saaid u dhaxeynin, haddna waxaa Jiro inyaroo farqi ah oo u dhaxeeyo waajibna ay tahay in lakala fahmo. Information Technology markaan ka hadleyno ku shaqeynta IT da waxaa muhim ah inuu garanayo shaqaalaha sida loo install gareeyo system ka, sida loo habeeyo iyo sida loo … Continue reading Maxey ku kala duwan yihiin Computer Science iyo Information Technology!! →
Fatuux Cade	Tech News	Leave a comment March 4, 2019 March 3, 2019 1 Minute
Email kaaga gali si aad u follow gareeso ayna kuu soo gaarto wixii cusub.